DFS oo markii ugu horreeysay ka qeyb gashay Shirka la-dagaalanka Musuqa ee ka furmay Jabuuti | dayniiile.com
Home WARKII DFS oo markii ugu horreeysay ka qeyb gashay Shirka la-dagaalanka Musuqa ee...
DFS oo markii ugu horreeysay ka qeyb gashay Shirka la-dagaalanka Musuqa ee ka furmay Jabuuti
Waxaa si rasmi ah magaalada Jabuuti ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ugu furmay Shirweynaha 8-aad ee Caalamiga ah ee Madasha Afrika ee Ladagaalanka Musuqmaasuqa, iyo Hay’adaha Isku-dhafka ah (FIGE).
Soomaaliya oo ah markii ugu horreysay ay ka qeyb gasho shirkan ayaa waxaa ku matalaya xubno ka tirsan Guddiga Madaxa Bannaan ee la-dagaalanka Musuqmaasuqa uuna hoggaaminayo Commissioner Khadar Axmed Diiriye,islamarkaana uu wehliyo Commissioner Cabdullaahi Abukar ayaa ka qeyb galaya shirka.
Shirka oo uu furay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa soo dhaweeyay madaxda iyo wufuuda heerka caalami ee kasoo qeyb gashay. Sidoo kale Madaxweynaha ayaa si diirran ugu soo dhaweeyay Soomaaliya xubinimadeeda Dalalka Hay’adaha Isku-dhafka ah ee La dagaalanka Musuqmaasuqa (FIGE).
Shirkan saddexda maalin uu socdo oo diiradda lagu saari doono dowlad-wanaagga, wax-qabadka hay’adaha dowladda iyo la-dagaallanka musuqmaasuqa ayay xubnaha ku matalaya Soomaaliya waxay shirar gaar gaar ah la yeelan doonaan madaxda iyo hay’adaha caalamiga ah ee kasoo qeyb gashay shirka.
Soomaaliya waxay dadaal dheeraad ah ku bixineysaa kor uqaadista daah-furnaanta iyo isla-xisaabtanka hay’daha dowladda iyo sidoo kale la-dagaalanka dhamaan noocyada kala duwan ee musuqmaasuqa.
Previous articleSAWIRO:- Waddooyinka qaar ee Muqdisho oo saaka xiran
Next articleDowladda Soomaaliya oo kordhisey Qiimaha xajka ee Sannadkan
After price protests turned political, Iran holds pro-government demonstrations.